आज को विषयवस्तु सुँगुर संग व्यंजनहरुको लागि व्यञ्जनहरु हो। घासका पछाडि सलाद, पहिलो पाठ्यक्रम, नाश्ता, आदिको तयारीको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
सुँगुरबाट डिश। चावल र फटा पनीर सँग पाइको लागि नुस्खा
मूल, स्वादिष्ट र उपयोगी sorrel देखि एक पिटा (पाइ) पाउनेछ।
परीक्षणको लागि प्रयोग गर्नुहोस् :
जैतून का तेल -9चम्मच। एल।
खमीर - 20 जी (वा सुखाको एक टुक्रा);
अंगूर सिरका - 1 tbsp। एल।
दूध वा तातो पानी - 200 जी;
भरने को लागी तपाईंलाई आवश्यकता हुनेछ :
सोरेल, लसुन, हरियो प्याज, अशुद्ध, चावल उबले, डिल, फटा पनीर, अण्डा, जैतून का तेल, काली मिर्च, नमक।
आटा घुमाउनुहोस्। यो गर्न, गर्मीको पानी वा दूध। यसको साथ खमीर भर्नुहोस् (खमीर भने ताजा छ भने)। एक अलग कन्टेनरमा तेल, नुन, सिरका मिलाउनुहोस्, दूध दियो र आटा जोड्नुहोस्। आटा घुमाउनुहोस्। यो नरम, नराम्रो हुँदैन, तर तरल हुँदैन। एक तौलिया संग कंटेनर राख्नुहोस्। न्यानो ठाउँमा 40 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। आटा उठ्छ गर्दा, भरपूर ध्यान राख्नुहोस्। सुँगुर धुनुहोस्, यसलाई सुखार्नुहोस्। यसलाई पक्कै स्वाद गर्नुहोस्। चावल फोडा, सागहरूसँग मिश्रण। फोर्कको साथ ल्याउनुहोस् र चावलमा थप गर्नुहोस्। अण्डा हरु। स्नेहनको लागि एक जङ्गल अलग हुन सक्छ। सबै सामग्री सँगसँगै मिलाउनुहोस्, नमक, तेल र कालो मिर्च थप गर्नुहोस्। नमक संग, सावधान रहनुहोस् - फटा पनीर एकदम नमकीन छ। आटा तीन भागमा विभाजन गर्नुहोस्। तीमध्ये एक, जो पाईको तलतिर जान्छ, बढी गर्नुहोस्। यसलाई रोल गर्नुहोस् ताकि किनाराहरू पाना पानाबाट फाँसिन्छ। भरिएको एक भाग को बाहिर राख्नुहोस्, दोश्रो संग खुट्टा को टुकडा बाहिर टुकडे को कवर। प्वाइन्ट यो फोर्कको साथ। भरपूर बाकीको साथमा, तेस्रो तहको आटा संग आवरण गर्नुहोस्। किनारहरू बन्द गर्नुहोस्। अन्डा जिरोको साथ शीर्ष पाई। लगभग एक घन्टाको लागि ओवनमा बान्नुहोस्। यस डिश को लागि sorrel देखि कम से कम 180 डिग्री हुनु पर्छ। पकाउनुहोस्, जस्तो कि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, जटिल छैन। पाई स्वादिष्ट भयो, थोपाको साथ।
सुँगुरबाट डिश। व्यञ्जनहरू, मुर्दाको स्वादमा सूपको तस्बिर
के तपाईंले सुँगुरबाट सूप तयार गर्नुभएको छैन ? त्यसपछि चाँडै गरौं।
चिकन, सुगन्ध, प्याज, आलु, कोह्र्रबी, गाजर, फ्वेल, एस्पारागस, मीठो मरिच, नमक र सीजनहरू खाद्य पदार्थको सूची हो जुन तपाईले सुग्रेको यो डिशको लागि आवश्यक पर्दछ।
नुस्खा तयार गर्न सजिलो छ। मासुको साथ सुरू गर्नुहोस्। चिकन धुनुहोस् र फोडा गर्नुहोस्। फोम हटाउन नबिर्सनुहोस्। भोरमा एक पुरा बल्ब राख्नुहोस्। तयार हुनुहुने खाना नभएसम्म कुकुर नमस्ते, मसाले राख्नुहोस्, स्टोवमा थोडा थप राख्नुहोस्। त्यसपछि भाइरसबाट चिकन र प्याज लिनुहोस्। सब्जियों र sorrel कुल्ला। गाजर पीस, सुँगुर पतला कटौती गर्नुहोस्। आलु र अन्य अवयवहरूले तपाईलाई मन पराउँछन्। भोटमा सबै तयार खाना छोड्नुहोस्। जब तिनीहरू पकाइरहेछन्, हड्डीबाट चिकन मासु बन्द गर्छन् र यसलाई फाइबरमा विभाजन गर्छन्। प्यानमा राख्नुहोस्। स्वादको लागि सूप प्रयास गर्नुहोस्। एक थोडा सास sorrel बाट बर्तन हुन सक्छ। यस मामला मा नुस्खा चीनी को साथ पूरक हुनु पर्छ। सूप सेवा गर्नु पहिले अण्डा फोडा। यसलाई धेरै भागहरूमा विभाजन गर्नुहोस्। भागिएको डिशमा राख्नुहोस्।
सुँगुरबाट डिश। आलु सलाद को लागि नुस्खा
तपाईंलाई चाहिन्छ :
सोरेल, आलु, उबलाएको अण्डा, ताजा खीराहरू, सरसफाइ, हरियो प्याज, नुन, मरिच, सब्जी तेल।
आलु उर्लेर, यसलाई क्यूबमा काट्नुहोस्। काली, नमक र दाढ़ी संग तेल मिश्रण को एक चम्मच। आलु संग सिजन सिजन। ककुलहरू स्ट्रा, अण्डा - सर्कलहरूमा, हरियो प्याज काट्नुहोस्। सोरल टुक्रा पतली स्ट्रिप्समा। सबै अवयवहरूसँग आलु, मिश्रणको मिश्रण गर्नुहोस्, सानो तेल राख्नुहोस् र तालिकामा सेवा गर्नुहोस्।
मकारोनी "शिरतकीकी": संरचना, क्यालोरी सामग्री, व्यञ्जनहरु, समीक्षाहरू
जचिनबाट क्यान्डयुक्त फल: भिटामिन मिठाईको तयारीको लागि तीन व्यञ्जनहरू
आलुको साथ आलु र ओवनमा मासु - छिटो र स्वादिष्ट
Giros: घर मा खाना पकाने को लागि नुस्खा
कुन दाँतले बच्चा परिवर्तन गर्छ र कुन उमेरमा गर्छ?
सरल ब्याज कसरी गणना गर्ने?
माछा मार्ने रहस्य: अफसेट हुक
Xeno Sonas Alpina4* (टर्की / Alanya): फोटो र समीक्षा, स्थान, वर्णन
4 महिनामा बच्चा मेरो दैनिक दिनचर्या: खाने, सुतिरहेको, हिँड्ने